कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबिच गोप्य सहमति, अब के गर्छन् प्रचण्ड-उपेन्द्र-बाबुराम?Nepalpana - Nepal's Digital Online
कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबिच गोप्य सहमति, अब के गर्छन् प्रचण्ड-उपेन्द्र-बाबुराम?
Nepal Pana चैत्र ३० २०७७
काठमाडौं । सतहमा सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास भइरहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भित्री लाइन निर्वाचनमै जाने देखिएको छ । तत्काल चुनावमा जानका लागि तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन जसपाका ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले भूमिका खेलिरहेको छ ।
ठाकुर र महतो मुद्दाका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिन्छन् । चुनावमा जाने सबालमा यो पक्षको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री ओलीका साथै कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि मिल्छ । कांग्रेसले चैत २१ गते आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस्तो निर्णय गराउने पक्षमा देउवा थिएनन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको दबाबले उनी बाध्यतामा परेका हुन् । पार्टीको निर्णयपछि पनि देउवा केही दिन ढुक्कले बसे । सरकार निर्माणमा पहल नगरेको भनेर आलोचना भएपछि उनले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जसपासहितको बैठक डाके ।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पनि गरेको कान्तिपुरले लेखेको छ । माओवादी केन्द्रले सजिलै स्विकारे पनि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले मानेनन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ठाकुर र महतो सरकार निर्माणमा सामेल हुन्छन् भन्नेमा सुरुदेखि नै देउवालाई विश्वास थिएन । पौडेल र सिटौलाको दबाब मत्थर बनाउन मात्र उनले तीन दलको बैठक डाँकेका हुन् ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा देउवाको भयंकर प्रहार
धनगडीमा ओलीको कुकृत्य, देउवाकाे घोषणाले खैलाबैला !
देउवालाई फलिफाप, ढुक्कसँग हुने भए प्रधानमन्त्री !
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार ०९:४५:२० बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि सपथ लिने निश्चित, शीतल निवासमा तयारी, जसपाबाट ७ जना मन्त्री बन्दै